#Belfie — Instagram မှာ တင်ဖို့ တင်သားအလှ ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးရန် ရေပန်းစားနေတဲ့ Fijian Resort
Monday, July 17, 2017 Incredible
စိမ်းပြာနေတဲ့ ရေများ၊ ဖြူလွှနေတဲ့ သဲသောင်ပြင်များရှိတဲ့ Fiji ရဲ့ Laucala Island ဟာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ အကြားမှာ ရေပန်းစားပါတယ်။ တစ်ရက် တည်းခိုခ ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ လောက်ပေးရတဲ့ Resort ဟာ သမားရိုးကျ မဟုတ်တဲ့ Instagram Trend အသစ်ကြောင့် အခုတော့ လာရောက်လည်ပတ်သူ ပိုမို များပြားလာပါတယ်။
အဲဒီ Instagram Trend ကတော့ Resort ရဲ့ ဖန်နံရံ ရေကူးကန်ထဲမှာ Belfie or Butt Selfie လို့ခေါ်တဲ့ တင်သား အလှဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်လီများဖြစ်တဲ့ စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင် Evan Spiegel နဲ့ မော်ဒယ် Miranda Kerr တို့စုံတွဲဟာလည်း အဲဒီ Resort ကို ဟန်းနီးမွန်းထွက်ခဲ့ကြပြီး အဲဒီမှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို Instagram မှာ တင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် Belfie Trend ကို Instagram မှာ စတင်ခဲ့သူ ဖြစ်နိုင်တာက မော်ဒယ် Amanda Wellsh ဖြစ်ပြီး ရေကူးကန်ရဲ့ ဖန်နံရံကို တင်ပါးဖြင့် ကပ်လျပ် ရိုက်ကူးထားတဲ့ တင်သား အလှ ဓါတ်ပုံများကို Instagram မှာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ အချို့ကလည်း ရေကန်ဘောင်ပေါ်မှာ ထိုင်လျက် တင်သားအလှ ဓါတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးကြပါတယ်။
Thank you @laucalaisland for the most incredible vacation! This place is pure heaven! 🙏🏼
A post shared by Chelsea Washington (@chelseasalmon1) on Jun 30, 2017 at 1:03pm PDT
A post shared by Eugene L (@eugeneloane) on Jun 14, 2017 at 12:39am PDT
Fijian Resort မှာ Villa ပေါင်း ၂၅ ခု ရှိပြီး စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ဘား ငါးခု ရှိပါတယ်။ မီတာ ၂၀၀၀ ပတ်လည် အကျယ်ရှိတဲ့ ရေကူးကန်လည်း ရှိပါတယ်။ ကမ်းခြေမှာ ရေကစားနည်းများစွာ၊ ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်း၊ မြင်းစီးခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။